Kulesi sifundo esibizwa ngokuthi ifenisha yasehhovisi laseJalimane, lapho sizohlola khona ifenisha yasehhovisi laseJalimane, sizokufundisa ifenisha nefenisha yasehhovisi laseJalimane esetshenziswa kakhulu. Le ndaba isuselwa ekhanda futhi kwanele ukufunda amagama asetshenziswa kakhulu kuqala kuqala.
Ifenisha yasehhovisi laseJalimane Yize kubukeka kufana nebhizinisi laseJalimane, kuyindaba ebaluleke kakhulu njengoba kunemishini nezinto esizisebenzisayo ezindaweni eziningi zezimpilo zethu ngaphandle kwendawo yokusebenza. Ngenkathi sifundisa isifundo sethu, sizonikeza uhlu lwezinto ezisetshenziswa ehhovisi, uhlu lwezinto ezisetshenziswe ehhovisi nohlu lwefenisha yasehhovisi ematafuleni ahlukene.
Zama ukubamba ngekhanda igama ngalinye etafuleni elinikeziwe ngezindatshana zazo kanye nencazelo yazo. Qiniseka ukuthi usebenzisa amagama asanda kufundwa emishweni ngesikhathi somkhuba wakho wokubamba ngekhanda. Ngale ndlela, uzokwenza ukuba izinkumbulo zibe lula futhi zikhumbuleke kalula.
Izinsiza kusebenza zaseHhovisi Okulingana nesiJalimane
ikhompyutha → der Computer
isibonisi → der Bildschirm
Somlomo → der Lautsprecher
ifoni → ifoni
Ukukopisha umshini → i-Photocopier
Umshini wefeksi → das Faxgerat
iphrinta → der Drucker
Igobolondo → afe uPatrone
Iphrojektha → der Projector
I-Calculator → der Taschenrechner
Ifenisha Yasehhovisi laseJalimane Ifanekiselwe
Bangani abathandekayo, ake sichaze imishini yaseJalimane esetshenziswa kakhulu enezithombe.
Izinto ezisetshenziswe eHhovisi LaseJalimane
Manje ake sibheke izinto zaseJalimane ezisetshenziswe ehhovisi njengetafula.
Izinto ezisetshenziswe eHhovisi Okulingana nesiJalimane
irabha → der Radiergummi
Isikelo → die schere
Ukulola → der Anspitzer
Iphini yephepha → afe Buroklammer
Iphedi Yokubhala Enyakazayo → der Schreibblock
Umbusi → ngu Lineal
Imvilophu → der Briefumschlag
Isitembu → afe Briefmarke
Glue → Kusho uKleber
Ipeni → der Kugelschreiber
Ipeni → der Fullfederhalter
ngepeni → ku-Stift
Umaka → der Fluoreszierender Stift
Ipensela → der Bleistif
Paper → das blatt-iphepha
Inothi lokuvimba → der Vimba
Kitap → ngoBuch
incwadi → das Notizheft
ifayela → kufa uMappe
Amaslayidi → afe Dias
Ibhendi → das klebeband
Okuyisisekelo → afe Hefter
ikhalenda → der Kalender
Ngezansi kukhona imishini yasehhovisi esetshenziswa kakhulu eJalimane naseTurkey.
Ifenisha yasehhovisi laseJalimane Okulingana nesiJalimane
Masa → ngoTisch
Ibhasikidi le-Wastepaper → der Papierkorb
esihlalweni → der Stuhl
ifulege → afe Flagge
Isibani → afe Lampe
Khanyisa → ngo-Licht
# Ifenisha yasehhovisi laseJalimane
# Ifenisha Yasehhovisi laseJalimane Ifanekiselwe
# Izinto ezisetshenziswe eHhovisi LaseJalimane
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni eziyi-9 ezedlule, ngoMashi 17, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngo-Ephreli 20, 2021.